Wararka Maanta: Axad, Mar 24, 2013-Kal-fadhi aan Caadi ahayn oo Baarlamaanka Puntland uga Furmay Magaalada Garoowe ee Xarunta Puntland [SAWIRRO]
Qodobada kal-fadhigan ay baarlamaanku ku gorfeyn doonaan, waxaa kamid ah kuwo ay horay ururada siyaasadda ee Puntland uga biyo-diideen, haseyeeshee ay guddiga kumeel gaarka ah doorashoyinka Puntland codsadeen in dib u eegis lagu sameeyo, maadaama aysan ahayn kuwo xilligan la hirgelin karo.
Waxaana qodabada ay guddiga doorashooyinku codsadeen in wax laga bedelo horay usoo ansixiyey golaha wasiirada, inkasta oo aan ilaa iyo hadda la saadaalin Karin go’aanka uu arintaas baarlaanku ka qaadan doono. Qodobadan dib u eegista lagu sameynayana waxaa kamid ah: diiwaan gelinta dadka, kala xadeynta gobollada iyo sameynta aqoonsiga Puntlander-nimada.
Bayaan ay tododbaad kahor si wada jir ah usoo saareen shan kamid ah lixda urur-siyaasadeed ee rasmiga ah ee xilligan Puntland ka jira, ayey ku sheegeen in aysan aqbali doonin doorashada goleyaasha deegaanka, haddii uu guddiga doorashooyinku wax ka bedelo qodobadii horay loogu heshiiyey.
Qoraal kaas jawaab u ah oo kaso baxay xafiiska guddiga kumeel gaarka ah ee doorasooyinka Puntland, ayaa lagu sheegay in guddigu uusan sharciga marna ka bayri doonin, haseyeeshee qodobada qaarkood ay lagama maarmaan noqotay in laga tanaasulo, maadaama ay yihiin kuwo aan xilligan la hirgelin Karin.
Qaar kamid ah ururada siyaasadda ee ku tartami doona doorashooyinka goleyaasha deegaanka – oo noqonaya kuwii ugu horeeyey ee Puntland ka dhaca – ayaa si cad u sheegay in aysan doorashada ka qayb geli doonin haddii qaabka ay doorashadu u dhacayso wax laga bedelo.